Lisitry ny modely SAP ERP ao 2018 | SAP Modules | NY
Inona avy ireo SAP Module? Lisitry ny Modely SAP ERP
Rafitra fanaraha-maso sy programa, tsy misy ny fotoana fantatra amin'ny hoe SAP dia mivoatra amin'ny fomba vaovao amin'ny SAP modules novolavolaina mba hanatanterahana ireo sehatra ara-barotra samihafa avy amin'ny fitantanana ny asa, ny fitaovam-ponenana, ny fitantanam-bola ary ny varotra hafa ankoatra ny hafa.
SAP dia nametraka ny asany eo amin'ireo manampahaizana momba ny asa toy ny fanamarinana ny SAP izay mitantana ny Enterprise Resource Planning, izay fototra iorenan'ny orinasa goavam-be sy orinasa matihanina ao amin'ny orinasa mba hanamafisana ny fahaiza-manaony.
Ny karazany maro SAP Modules azo atao ny manana ERP izay ahafahan'ny fikambanana miavaka amin'ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra iray mifamatotra amin'ny tanjona iray manan-danja. Talohan'izay, ny fampiroboroboana ny orinasam-barotra dia nampiasaina tamin'ny fanatanterahana ny lisitra. Taorian'izay, fomba isan-karazany ny fomba fiasa mifandraika amin'ny sehatra samihafa ao amin'ny orinasa iray. Androany, ny SAP dia ampahany fototra amin'ny sehatry ny IT ary ampiasaina ho toy ny ampahany amin'ny fampiasana ny karazana fampiasana rehetra manitatra amin'ny fitantanana ny informatika, mitatitra ny fanomanana sy ny famolavolana ny asa.
Amin'ny fanatanterahana ny mari-pamantarana SAP amin'ny iray amin'ireo sokajinao voafantina, dia tsy dia mitaky ny hahazo toerana mendrika, mahafeno ny fepetra amin'ny vokatra ary manintona ny fananana asa tsara kokoa ao amin'ny orinasa tianao.
Inona avy ny modely SAP sy ny fomba fiasa SAP?
Lisitry ny Modely SAP ERP
3. SAP Sales and Distribution
7. SAP Fitantanan-draharaha momba ny fitantanana ara-bola
8. SAP Materials Management
The ERP SAP modules dia voatokana ho an'ny sokajy samihafa amin'ny fanaovan-javatra maro samihafa. Izy ireo koa dia mifototra amin'ny lanjan'ireo marika goavam-be izay mampiasa azy ireo ary ny fikambanana littler dia manana fironana hamerina izany ho an'ny hetsika matihanina.
Ny modely SAP dia misaraka amin'ny môdely amin'ny Teknika sy Teknika izay apetraka ny sokajy rehetra voalaza etsy ambany.
Ny môdely manan-danja matetika ampiasain'ny manam-pahaizana dia,
AP Management Human Capital
SAP Fitantanan-draharaha momba ny fitantanana ara-bola
SAP Human Capital dia natao ho an'ny fizaran'asa fitantanana ny HR izay ahafahan'ny manam-pahaizana manara-maso ny famonoana ny solontenan'ny repoblika, manolotra fanadinana, manombantombana ny fahombiazan'izy ireo ary mitantana fandrosoana. Ny rafitra dia azo ampiasaina ihany koa amin'ny fanatanterahana ny fitantanam-bola, ny mpiasa miasa ao ary ny fanaovana rindran-draharaha hanamafisana ireo endrika na inona na inona ny fampidirana am-ponja ny orinasa.
Môtô iray manan-danja ao amin'ny lisitra, SAP Production Planning dia afaka manara-maso ny asa tsy tapaka, ny fivarotana, ny fampiharana dokam-barotra, ny fikarakarana vola, ny fitaovam-pandrafetana fitaovana ary ireo loharanom-pahazoan-dalana mifanentana amin'ny fomba mahomby indrindra amin'ny mpiandraikitra. Ny modely dia mamerina manamboatra sy manara-maso, manome fomba fijery ambonimbony kokoa momba ny tombantombana mba hampiasana sy hampiasana ireo loharano novokarina mba hanatanterahana ny tanjony.
SAP Sales and Distribution dia môtera manan-danja ho an'ny orinasa tsirairay izay mitantana ny mpanjifany mivantana. Azo ampiasaina io fangatahana io mba hangatahana fanambarana, fanangonan-tsonia, soso-kevitra, fampidirana na fanovana ny fangatahana amin'ny fampiharana samihafa. Raha toa ny manam-pahaizana iray miantoka ny mari-pamantarana SAP amin'ny iray amin'ireo môsialy manan-danja ireo, dia afaka mahazo asa ao amin'ny birao manokana izy ireo. Ny modely koa dia manome torolàlana amin'ny fitaterana, ny fitaterana, ny fitadiavam-bola, ny faktiora ary ny fitantanam-bola.
Natao ho an'ny orinasa amin'ny fangatahana fepetra, SAP Controlling Ny modules dia manome ny mpitarika miaraka amin'ny drafitry ny asa aman-draharaham-pandraharahana sy ny sehatra rehetra momba azy. Ny môleo dia mahatonga azy io ho mora kokoa hanaraha-maso ny vola, ny fisainana ary ny fandaniana. Ny fanaraha-maso dia mandeha toy ny rafitra tafiditra izay manome vola miditra an-tsokosoko, tombontsoa sy fangatahana an-tsena mba hametrahana safidy amin'ny fahazoana ny filàna haingana.
Ny orinasa tsirairay dia mitaky ny hanamafy hatrany ny habetsahan'ny kalitao avo indrindra. The Ny fitantanana kalitao SAP Ny modely dia ahafahan'izy ireo miasa amin'ny fomba voajanahary mba hampitana ny hatsaran'ny tsara indrindra amin'ny zavatra tsirairay. Ny fanatanterahana ny famoronana, ny fikarakarana sy ny fanadihadiana amin'ny fivarotana sy ny kalitaon'ny maso, ny zavatra rehetra dia ampitaina amin'ny fitambaran'ny serasera. Ny fanamarinana kalitao dia ara-dalàna ary tsy mampihena ny fitantanana ny fanaraha-maso mba hiantohana ny kalita tsara indrindra, na inona na inona ny zavatra entina amina fandaharam-potoana.
SAP Project Systems dia modely iray entina hanampiana vondrona iray na fananganana fiaraha-miasa iray manontolo amin'ny tetikasa iray. Amin'ny fampiasana ilay môdelina, afaka manomboka manomboka ny fandaharana ny manampahaizana, manaraka sy manao tatitra mafonja. Amin'izay fotoana izay ny modely no raisina rehefa vita, dia manadihady ny saran'ny tetikasa, ny fitaovana enti-manana ary ny loharanom-bola ilaina mba hanatanterahana ny tetikasa.
Môtô hafa iray hafa ao amin'ny lisitra, SAP ny fitantanana ara-pitaovan'ny SAP dia mitantana ny fitantanam-bola sy ny fiatrehana ny filan'ny orinasam-pandraharahana ao anaty orinasa. Ny modely dia ampiasaina hanaraha-maso ny vola, ny fanjakana liquidity, ny harena ary koa ny fiandrasana ny loza ateraky ny fisamborana. Ankoatr'izay, amin'ny fiainana andavanandro amin'ny sehatra ara-bola, dia azo ampiasaina ihany koa izy io mba hanara-maso ny adihevitra, ny ampitsaharana ary mandeha ho toy ny dingana hijerena ny angon-drakitra ho an'ireo zavatra omena ao anatin'ny andro sy taona manokana.
izany SAP Ny modely dia mitantana ny zava-drehetra mifandray fitantanana fitaovana anisan'izany ny fahazoana ny fitaovana tena ilaina, ny fitazonana ny lisitra, ny fanombanana ny lisitra, ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny entana entin'ny mpivarotra, ny mamaritra azy ireo ary ny fanamafisana ny fangatahan'ny mpivarotra. Azo ampiasaina koa ny modely mba hanaraha-maso ny fepetra takiana.
Ho an'ireo orinasa izay nanolo-tena nanangona zavamaniry, SAP plant Maintenance Ny modely dia manome fahafahana azy ireo hifehy ny sehatra samihafa amin'ny fananganana fananganana maoderina. Ny fanangonana ny rafitra dia mamporisika ireo manam-pahaizana hamolavola fanohanana, famotehana, fepetra fisorohana ary rafitra prescient mba hiantohana ny famoronana tsy tapaka.
Raha toa ka ireo no tena SAP modules tokony ho fantatrao, a SAP certification Ny fisarahana amin'ny fampiharana maoderina sy ny fandaminana ara-bola dia azo alaina ao amin'ireo rafitra ara-teknika manokana indrindra amin'ny fikambanana manokana. Ny mozika mahazatra indrindra dia mampiditra Netweaver, ABAP, SAP Basis, BIW, SAP HANA ary XI. Amin'ny fanamafisana ny tsara indrindra amin'ireny modules ireny, ny fikambanana dia afaka mamaha tsara ny loharanon-karenany ary mijanona ho laharam-pahamehana.
SAP Financial Planning dia natao hamongorana ny paikady amin'ny fitantanana ara-bola ary mba hahazoana ny fifanakalozan-kevitra rehetra ao anaty rafitra iray. Ny fananganana dia mitondra fahatakaran-tena ary manome fahafahana ny vola mba hahazoana tombontsoa hahatakarana ny toetra, hampihenana ny fandaniana rehefa azo eritreretina sy miorina amin'ny safidy ampianarina. Ny modely azo avaozina sy azo ampifanarahana dia azo ampiasaina amin'ny fikambanana isan-karazany, manampy azy ireo hampiray ny daty.
Fikarohana fikarohana momba ny sokajy SAP Modules lisitra:
sap modules listPDF
Fantaro ireo modulesin demand
Fantaro ireo modulesppt
Ireo kilasy fampiofanana mahatalanjona indrindra momba ny SAP ERP izay renao hatramin'izay